မမရိန်ရဲ့အောင် - CeleHits
ဒါ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်သွားတာဘဲ….အောင် ..မင်းနဲ့ငါ ထပ်တွေ့စရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး….”မမရိန်ရဲ့စကားလုံးတွေက ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်သွားစေပါတယ် ။ “ မမ…ကျနော့်ကို ဘွန်းဖစ်ရှ် မှာ ဒင်နာစားဖို့ ခေါ်တာကကော အက်ဆီးဒင့်ဘဲလားဟင်……”“ အိုကွယ်…မင်း ထင်ချင်ရာထင်….မတော်တဆဖြစ်သွားတာ..အက်ဆီးဒင့်.ဖြစ်သွားတာ…..လူဆိုတာ အမှားမကင်းဘူး… တသက်တခါ မှားသွားတာလေးတွေ ရှိကြတာပေါ့…ကဲ…မင်း…မမ ကို မေ့လိုက်တော့….” မမရိန် သည် အောင့်ကို ကျောခိုင်းပြီး အပြေးကလေး ထွက်သွားတယ် ။ အောင် တပ်မက်ခဲ့ရတဲ့ ထွာဆိုင်ခါးလေဲး့ အောက်က လှလွန်းတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တုန်ခါသွားတာ ကို အောင် ရင်နာနာနဲ့ ငေးရင်း ကျန်ခဲ့တယ် ။ မမနဲ့ အောင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးမှာ မမဘဲ ဇာတ်ညွှန်းရေး..မမဘဲ ဒါရိုက်တာ..မမဘဲ သရုပ်ဆောင် သွားတာပါ….အောင့်မှာတော့ အရူးကို အမဲသား ကျွေးမိလိုက်တာမျိုး….မမ….မမ….နဲ့ အရူးအမူး ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့ရတယ် ..။
မမ နဲ့ စတွေ့တာက မယ်လိုဒီတို့ အိမ်မှာ မယ်လိုဒီရဲ့ ညီမလေး ခရစ်တီးနာရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ လုပ်တော့ မယ်လိုဒီက ဖိတ်တာနဲ့ အောင် ရောက်သွားတယ်…လူရင်းတွေချည်း ဖိတ်တာမို့ ညနေပိုင်းမှာ ရေကူး ကန်ထဲ ရေကူးရေဆော့တဲ့လူ ရှိသလို ဘာဘီကျူး ကင်နဲ့ ဘီယာနဲ့ ထိုင်စားတဲ့လူက စား….လုပ်နေကြ တဲ့အချိန် နတ်သမီးလေးတပါး နတ်သက်ကြွေကျလာသလို မမသည် တလှမ်းချင်း ကြွကြွရွရွလေး လှမ်း ရင်း အောင်တို့ ရှိတဲ့ ရေကူးကန်ဆီကို ရောက်လာပါတယ် ။ မမကို အောင် တခါမှ မတွေ့ဖူး မဆုံဖူးသေးဘူး ။ မယ်လိုဒီ့ကို မမ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ မေးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်နေတယ် ။ လူလစ်ရင်တော့ မမအကြောင်းကို မေးမယ်လို့ စိတ်ကူးနေတယ် ။ လှလွန်း တဲ့ မမကို ရေကူးကန်ထဲကနေ ခိုးကြည့်နေမိတာ တချိန်လုံး ။ရေကို ကန်ထဲမှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ကူးနေမိရင်း မမလှလွန်းတာကို စိတ်ထဲမှာ မယုံနိုင်သလို အံ့သြ နေမိတယ် ။ မမက မျက်နှာလေးတင် လှတာ မဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း တကယ့်ကို အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် အစစ လှနေတာ ။မမ အသားဖြူ ပုံက ဝင်းဝါတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဖြူ ဆွတ်နေတာမို့ မမဟာ ဥရောပသွေး ( အဖြူ ) များ နှောလေသလား လို့ အောင် ရေကူးရင်း စဉ်းစားနေမိတယ် ။ရေကူးကန်ထဲက တက်လာတဲ့အခါ မမက အောင့်ကို ပြုံးပြီး စိုက်ကြည့်နေလို့ အောင်လည်း မလုံမလဲ ဖြစ်မိတယ် ။ မယ်လိုဒီက မမကို အောင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။
မမရိန်…ဒါ မယ်လိုဒီ့သူငယ်ချင်း…ဂျော့ခ်ျမေဆင်မှာတုံးက အတူတူ တက်ခဲ့ကြတဲ့ အတန်းဖေါ်ပေါ့.. အောင်….နံမည်အပြည့်အစုံက …အောင်မြတ်မော်…တဲ့..အောင်ရေ..ဒါ …ငါတို့မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးလို ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ မမရိန်….မမရိန်မှာ အမတယောက် ရှိသေးတယ်….မမထိန်…တဲ့….မမထိန်က ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ…..” မမက ပြုံးပြရင်း..“ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ်…အောင်…” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ် ။ မမ မျက်လုံးတွေက အောင့်ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်သလိုဘဲမို့ အောင်လည်း အဝတ်လဲဖို့ မယ်လိုဒီတို့ အိမ်ထဲကို ခပ်သွက်သွက်ဘဲ ပြေးသွားလိုက်တယ် ။ မမကို မမပြန်သွားတဲ့အထိ အောင် ခိုးခိုးကြည့်မိနေတယ် ။ မမရဲ့ ခါးသေးသေးလေး အောက်ဖက်က တင်ပါးလှလှတွေက အောင် တခါမှ ဒီလောက် အချိုးကျတာ မတွေ့ဖူးသေးလို့ ခိုးကြည့်မိနေတာပါ ။ တခါမှာ မမက အောင့်ဖက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အောင့်ရဲ့ မျက်လုံးရိုင်းတွေကို မမ တွေ့သွား တယ် ။ အောင်လည်း မျက်စိလွှဲလိုက်ရတယ် ။ မမ ပြန်တော့ ငွေမှင်ရောင် တောက်နေတဲ့ လက်ဇက်စ်ကားကြီးထဲကို လှမ်းဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန် ပေါ် သွားတဲ့ မမရဲ့ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ ခြေသလုံးသားလေးတွေကြောင့် အောင်တယောက် ရင်တွေ တုန် ပြီး ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုရင် မမ ယုံပါ့မလား ။ မမအကြောင်းကို အသေးစိတ် မေးမလို့ ဥစ္စာ..မယ်လိုဒီကလည်း ဧည့်သည် မပြတ်လို့ မမေးလိုက်ရဘူး ။ အခုအောင်က မြို့ထဲက ရုံးကြီးတရုံးမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေတယ် ။
မြေအောက် မက်ထရိုရထားနဲ့အလုပ်ကိုသွားတယ်..ပြန်တယ် ။ ဒီနေ့ အလုပ်က အပြန်မှာ မြေအောက် ရထားဘူတာကနေ စက်လှေခါး ( အက်စ်ကလေတာ ) နဲ့ အပေါ်ကို တက်လာပြီး လမ်းတဖက်ကို ဖြတ်ကူးဖို့ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကားကြီးတစီး အောင့်အရှေ့ကို ထိုးဆိုက်လာတယ် ။ ငွေမှင်ရောင် စီဒင်ကားကြီးရဲ့ မှန်လေး နိမ့်ဆင်းလာပြီး ပေါ်လာတာက တအားလှတဲ့ မမရိန် ရဲ့ မျက် နှာ ပြုံးပြုံးလေး ။ “ အောင်…မဟုတ်လား….” “ ဟုတ်ပါတယ်…..မမ….” “ လာလေ အောင်…မမ နဲ့ လိုက်ခဲ့..အောင်သွားချင်တဲ့နေရာ ပို့ပေးမယ်….” “ ကျနော် အိမ်ပြန်မလို့ပါ…..အိမ်က သိပ် မဝေးပါဘူး….” “ ဝေးဝေးနီးနီးကွယ်…လာ…..မမ.လိုက်ပို့မယ်….တက်….တက်….” မမက အောင့်ကို အိမ်လိုက်ပို့ပေးတယ်..။ အိမ်ကို အသွား လမ်းမှာ မမ က အောင့်အကြောင်းတွေ မေးတယ် ။ မမနဲ့ အောင် ဖုန်းနံပါတ်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြတယ် ။ အလုပ်မှာ နည်းနည်း အားတဲ့ အချိန် မမကို အောင် ဖုန်းဆက်မယ်လို့ ချိန်ဆနေတဲ့အချိန် အောင် အလုပ်မှာ ရှိနေတုံး မမ ဖုန်းဆက်တယ် ။ ရင်ထဲမှာ အရမ်းပျော်မိရတယ် ။ မမအသံလေးကလည်း မမလိုဘဲ လှနေတယ် ။ ချိုနေတယ် လို့ ပြောချင်တာ ။ မမက “ အောင့်ကို မမ ညနေစာ ကျွေးချင်တယ်ကွယ်…” လို့ အသံတိုးဖျော့ဖျော့လေးနဲ့ ပြောလာ တယ် ။ အောင်ကလည်း မမနဲ့ ထပ်တွေ့ချင်နေတာ ဆိုတော့ မမ ခေါ်တာကို လက်ခံလိုက်တယ် ။
မမ ကျွေးမယ့်နေရာက ဘုန်းဖစ်ရှ် ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေး ။ မမက အောင့်ကို အိမ်မှာ လာခေါ်တယ် ။ မမနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ဖယောင်းတိုင်လေး ထွန်းပေးထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် စားပွဲလေးမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် အတူတူထိုင်စားနေရတာက အိပ်မက်တခုကို မက်နေ သလို ခံစားမိရတယ် ။ ဝိုင် တပုလင်း မှာပြီး အောင်နဲ့မမ သောက်ကြတယ် ။ အောင်စားဖို့ မမမှာပေးတဲ့ အမဲသားကင်ကလည်းမွှေးပျံ့ နူးညံ့နေတယ် ။ သူစားဖို့ မှာတဲ့ ဆယ်မွန်ငါးကင်လေး ကို မမက အောင့်ပုဂံပြားထဲကို ထည့်ပေးတယ် ။ ဝိုင်ပုလင်းလည်း ဗလာဖြစ် ဘိုက်လဲတင်း မူးရိပ်ရိပ်လည်း ဖြစ်..မမက အောင့်ကို သူ့အိမ်လိုက်ပြမယ် ဆိုပြီး ခေါ်သွားတယ် ။ မမရဲ့ အိမ်က ဘုန်းဖစ်ရှ် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ သိပ် မဝေးလှဘူး ။ မမရဲ့ အိမ်က တော်တော် သစ်တယ် ။ လှတယ် ။ မြေလည်း အကျယ်ကြီးဘဲ ။ ကားဂိုဒေါင် နှစ်လုံးနဲ့ ။ ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ အမိုးဖွင့် ပြိုင်ကားလေး တစီးကိုလည်း အောင်တွေ့တယ် ။ မမက သူ့အိမ်ကိုလည်း ရောက်ရော ကားထဲကနေ ခလုပ်လေး နှိပ်ပြီး ကားဂိုဒေါင် တံခါးကို ဖွင့်လိုက် တယ် ။ ပွင့်သွားတဲ့ ကားဂိုဒေါင်ထဲကို ကားထိုးဝင်လိုက်တယ် ။ ပြိုင်ကားလေးကို အောင်က ငေးကြည့်နေတာကို မမ တွေ့သွားတယ် ။
အောင်..သဘောကျလားဟင်….မောင်းကြည့်ချင်လား..မမ….ဝိအင်းတွေမှာ မြို့ပြင်တွေကို ကားလျောက်မောင်းတာ ကြိုက်တယ်….” “ ကောင်းတယ် ….မမ….” “ လာ..အောင်..အိမ်ထဲ ဝင်ကြရအောင်….” မမ က တန်းကလေးတခုပေါ် တင်ထားတဲ့ အိမ်သော့လေးကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး ဂိုဒေါင်ကနေ အိမ်ထဲကို ဝင်တဲ့ တံခါးလေးကို ဖွင့်လိုက်တယ် ။ အိမ်ထဲကို ရောက်သွားတာနဲ့ ဧည့်ခန်းက မီးတွေက အလိုလို ပွင့်လာတယ် ။ နီညိုရောင် အီတလီ ဆိုဖါကြီးတွေနဲ့ ဧည့်ခန်းက ပါးရှားကော်ဇော အနီရောင်နဲ့ လိုက် ဖက်နေတယ်။ တီဗီပြား ဧရာမကြီးနဲ့ စတီရီယိုစက်တွေနဲ့ မမရဲ့ ဧည့်ခန်းကျယ်ကြီးဟာ အရက်မျိုးစုံ စီတန်းပြ ထားတဲ့ အရက်ဘားနဲ့လည်း ကပ်ရက် ။ “ လာထိုင်…အောင်…အေးဆေးပေါ့.. ဘာသောက်အုံးမလဲ…အစုံရှိတယ် . . ” “ မသောက်နိုင်တော့ပါဘူး….မမ….” အောင်လည်း ဝိုင်မူးသလား..အချစ်မူးသလားတော့မသိဘူး ။ ကတုန်ကရင် ဖြစ်နေတယ် ။ အိမ်ထဲမှာ မမနဲ့ အောင်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတဲ့အသိကြောင့်လား…။ စိတ်တွေ လှုပ်ရှား ရင်တွေ ခုံ နေတယ် ။ မမက အောင့်ဘေးမှာ လာထိုင်တယ် ။ “ အောင်..မမနဲ့ ညစာစားရတာ ပျော်လားဟင်…” “ ပျော်တယ်….မမ……ကျနော်..ကျနော် အိပ်မက်…မက်နေသလိုပါဘဲ…..” မမ ရယ်လိုက်တာ အရမ်းဘဲ ။ “ ဒီလောက်တောင် ဘဲလားကွယ်…..” အိမ်ထဲမှာ အောင်နဲ့မမ နှစ်ယောက်ထဲ ။ “ မမ က တယောက်ထဲ နေတာလားဟင်…..” “ အင်း….” အိမ်က အကြီးစားကြီး ။ အနည်းဆုံး အိပ်ခန်းလေးခန်းလောက် ပါမယ့် အိမ်ကြီး ။ မမ တယောက်ထဲ နေနေတာတဲ့…။
“ မင်းကိုလေ..မမက..တွေ့တွေ့ချင်း တအား ခင်မိသွားတယ်…..အောင်က မမရဲ့ အကိုတယောက်နဲ့ ချွတ် စွပ်ဘဲ..သိလား….နောက် ကြုံရင် ..သူ့ဓါတ်ပုံကို အောင့်ကို မမ ပြမယ်….” “ အောင်ကလည်း…မမကို မြင်မြင်ချင်းထဲက……” မမ က အောင့်စကား ဆုံးအောင် ဆက်ပြောတာကို စောင့်နေတယ် ။ အောင်က မပြောဘဲ ရပ်လိုက် တော့ “ ဘာဖြစ်လဲ…ပြောလေ…..အောင်….” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ “ အရမ်း ခင်မင်သွားမိတယ် ..မမရယ်…..” လို့ အောင် ပြောလိုက်တယ် ။ တကယ် ပြောချင်တာကမမကို အောင် စွဲလန်းသွားမိတယ်လို့ ။ မမကို မယ်လိုဒီတို့ ညီအမတွေရဲ့ အိမ်မှာ စတွေ့တဲ့နေ့က အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန် ရေချိုးလည်း သတိရ အိပ်ရင်ထဲလည်း သတိရ ..မမရဲ့ အလှအပတွေကို မြင်ယောင်မိတော့လည်း အောင့် ပေါင်ကြားက ညီလေးက မတ်တင်းနေတာ အောင်လည်း လက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် လျော့ပစ်ခဲ့ရတယ်လေ ။ ဒါတွေကို မမက သိမှာ မဟုတ်ဘူး ။ “ အောင်..မင်း..မမကို သဘောကျလားဟင်….” မမက အောင့်ဘေးနား ကို ကပ်ရက်လေး လာထိုင်လိုက်ရင်း မေးတယ် ။
ကျ…ကျတယ်….မ….မမ…..” မမ နဲ့ လူချင်း ထိမိသလို မမရဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ အနံ့ကို ရှူရှိုက်မိလိုက်လို့ အောင့်စိတ်တွေ ခြောက်ခြား သွားရတယ် ။ စကားတွေ ထစ်ကုန်တယ် ။ “ ချစ်မိလား….” “ အင်း…..ချစ်မိတယ်….မမရယ်…အရမ်းကို ချစ်မိတာ…..” “ ချစ်ရင် နမ်းကွယ်…..မမကို နမ်း…” မမပြောလိုက်တဲ့ ဒီ စကားစုလေးက အရမ်းတိုးတယ် ။ အောင် ကြားလိုက်မိတယ် ထင်တာဘဲ ။ အောင့်နှုတ်ခမ်းတွေက မမနှုတ်ခမ်းအိအိတွေကို စထိကပ်လိုက်သလား..မမ နှုတ်ခမ်းအိအိတွေက စပြီး လာထိလိုက်လေသလား မသဲကွဲဘူး ။ အောင်နဲ့မမတို့ နှုတ်ခမ်းစုတ်မိကြတယ် ။ ငြင်ငြင်သာသာ ဖွဖွ လေး စုတ်လိုက်ကြတယ် ။ မမက အောင့်ကို သိုင်းဖက်တယ် ။ အောင်ကလည်း မမကို တအားဖက် လိုက်တယ် ။ မမနှုတ်ခမ်းတွေက ဖေါင်းဖေါင်းလေးတွေ ။ စုတ်ရင်း အငမ်းမရ ဖြစ်လာတယ် ။ ဖြစ်လာကြ တယ် ။ မမရောဘဲ ။ ကြမ်းတမ်းလာတဲ့ အနမ်းတွေနဲ့အတူ တယောက်နဲ့တယောက် ပွတ်သပ်မိလာ ကြတယ် ။ တဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့ ။ ပွတ်သပ် ဆုပ်နယ်မိလာကြရာကနေ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ အပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်တာထက် အသားချင်းထိချင်စိတ်တွေက ပေါက်လာတော့ အဝတ်တွေကို ချွတ်ပစ် ဖို့ ကြိုးစားလာကြတယ် ။ မမ က “ အိပ်ခန်းထဲကို သွားကြရအောင်ကွယ်….” လို့ ပြောပြီး အောင့်ကို ဖက်ထားတာကို လွှတ်လိုက် ပြီး အောင့်ကို အရှေ့ကနေ ဦးဆောင် ခေါ်သွားတယ်
မမရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ။ ခန်းနားသန့်ပြန့်တဲ့ မမရဲ့ ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ စောစောက ရပ်သွားခဲ့တဲ့ အနမ်းတွေကို မမကဘဲ ပြန်စလိုက်လို့ အောင်တို့ အနမ်းတွေ သဲသဲမဲမဲ နမ်းနေကြတဲ့အချိန် လျာချင်းပါ လုံးထွေးစုတ်ယူလာမိကြတယ် ။ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကိုလည်း စချွတ်ကြပြီ ။ မမ က “ အောင့်ကိုယ်လုံးက တကယ် ယောက်ျားပီသတယ်ကွာ…ဆက်ဆီ ဖြစ်တယ်…” လို့ အသံတုန်တုန်လေးနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း အဝတ်မဲ့ အောင့်ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ငုံ့ကြည့်ရင်း…“ အိုကွယ်….မမ ထင်တဲ့အတိုင်းဘဲ…” လို့ တီးတိုးလေး ရေ ရွတ်လိုက်လို့ အောင်လည်း “ ဘာထင်တာလဲဟင်….မမ…” လို့ မေးလိုက်မိတယ် ။ မမ က “ အောင် ရေကူးကန်ထဲက တက်လာတဲ့အချိန်လေ…မမ…အောင့်ပေါင်ကြားကို မရည်ရွယ်ဘဲ ကြည့်မိခဲ့တာ အောင့်ပစ္စည်းကြီးက ရေစိုပြီး အမြောင်းလိုက်ကြီး ပေါ်နေခဲ့တယ်လေ….အဲ့ထဲက မမက အောင်ကအကြီးစားဆိုက်နဲ့ ဆိုတာ သိလိုက်တာ….” လို့ပြောလိုက်ပြီး အောင့် ပစ္စည်းကို လက်ကလေးနဲ့ အသာကိုင်လိုက်တယ် ။ အိပ်မက် မက်နေသလိုပါဘဲလား…မမရယ် …။ မမရဲ့ လက်ဖဝါးလေးနဲ့ ထိတွေ့လိုက်တာကြောင့် အောင့်ရဲ့ ပစ္စည်းက ပိုထွားလာသလို ပိုမာတောင့်မတ်ထောင်လာသည်လို့ ထင်မိသည် ။ မမရဲ့ အဝတ်တွေကို တုန်ရီတဲ့ လက်တွေနဲ့ ချွတ်နေမိသည် ။
တခုပြီးတခု ကွာကျကုန်သည် ။ ဘယ် လိုမှမထင်ထားမိတဲ့ အတွေ့အကြုံ အဖြစ်ပါ မမရယ်…။ မမနဲ့ ကျနော် အဝတ်မပါ ဗလာကိုယ်တွေနဲ့ တ ယောက်နဲ့တယောက် ဖက်ပွေ့နမ်းစုတ် ကိုင်တွယ်နေမိကြတယ် ။ မမရဲ့ ပေါင်ကြားက မို့ဖေါင်းတဲ့ အ ကွဲကြောင်းကို လျာနဲ့ အောင် ယက်နေတဲ့အချိန် မမကလည်း အောင့်ပစ္စည်းကို စုတ်ပေးနေတယ် ။ မမ စုတ်တာ သိပ်ကောင်းတယ် . ..။ မမ အောင့်ထိပ်ဖူး ဒစ်လုံး အထစ်ကို လျာလေးနဲ့ လှည့်ပတ် ထိုး ကလိတာတွေက ပညာပါလွန်းတယ် ။ အောင့်ရဲ့ သုတ်တွေ လွှတ်ထုတ်မိတော့မလို ဖြစ်သွားတယ် ။ စစ်စတီနိုင်း ဆွဲတယ် ဆိုတာ အပြာဇာတ်ထုပ်တွေမှာဘဲ ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ် ။ အခု မမနဲ့ လုပ်တာ အောင့်အတွက် ပထမဆုံးပါဘဲ ။ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးတာတွေနဲ့ မမ ကောင်းအောင် တတ်သမျှ မှတ်သမျှ လုပ်ပေးမိတယ် ။ မမရဲ့ ညည်းသံတွေက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားနေရတယ် ။ အောင့်လျာကို မမအထဲကို ထိုးသွင်းပြီး ပတ်ခြာလှည့် မွှေနှောက်မိတယ် ။ မမရဲ့ ပေါင်ခြံတွေက မွှေးနေတယ် ။ မမ သူ့ပစ္စည်းနားကို ရေမွှေးတွေ ဆွတ်ထားတယ် ဆိုတာ အောင် သိလိုက်တယ် ။
အို…အို….အိုး…..အား……အား…အား…. မမ အနောက်ကို ဆုတ်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ အောင်က တင်ပါးကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖမ်းဆုပ် ထားပြီး အစိလေးကိုပါ စုတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ “ အိုး…အောင်ရယ်…အောင်ရယ်….အား…..အား…..မမ….မမ……မခံနိုင်တော့ဘူး…..မမ တအား လိုချင်နေ ပြီ…မမ…..လိုချင်နေပြီကွယ်……မမ..ကို……မမ..ကို…..ချစ်ပေးတော့ အောင်….” မမရဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း တတွတ်တွတ် ပြောနေတဲ့ စကားသံလေးတွေက တုန်နေတယ် ။ မမက အောင့်နဖူးကို အတင်း တွန်းလွှတ်တာမို့ အောင်လည်း ပေါင်ကြားက ခေါင်း ခွာလိုက်ပြီး မမရဲ့ အပေါ်ကို တက်လိုက်ပြီး ပေါင်တန်လှလှတွေကို ဖြဲကားရင်း အောင့်ပစ္စည်းကို မမရဲ့ ပစ္စည်း အဝမှာ တေ့လိုက်ရတယ် ။ မမရဲ့ စောက်ဖုတ်က စိုနေတယ် ။ အရည်တွေ တအား ရွှဲနေတယ် ။ မမ စိတ်တွေ တအား လာနေပုံရတယ် ။ မမရဲ့ ရင်စိုင်ကြီးတွေက တင်းမာဖီထနေကြတယ် ။ ရင်သီးလုံး ( နို့သီး ) အဖုလေးတွေကို စို့လိုက်ရင်း အောင့် ပစ္စည်းကို မမအထဲကို ဖိသွင်းထည့်လိုက်တယ် ။ “ အိုးရှီး……ဟင်း……..အားအား……” စိုအိ တင်းကြပ်တဲ့ မမပစ္စည်းထဲကို အောင့် ပစ္စည်း အောင်းလိုက်လို့ မမ တအားသဘောကျ ကြိုက် တဲ့ လေသံ ရှိတယ် ။ အစမို့ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန် လုပ်တာကို မမက အားမရဘူး ။ အောင်…လုပ်..လုပ် လေ…မမကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လုပ်ပေးကွာ…..လို့ မမက အောင့်ကို တွန်းအားပေးတယ် ။ တောင်းဆိုတယ် ။ အောင်လည်း မမရဲ့ ရင်စိုင်ကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်တွေ ပေးလိုက်တယ် ။ မမက သူ့ရင်သားတွေကို ညှစ်တာ ဆုပ်နယ်တာတွေကို ကြိုက်ပုံပေါ်တယ် ။
တအား..တအား….အောင်…ဆောင့်…ဆောင့်….တအားဆောင့်…” မမရိန်သည် ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါထဲက ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေသလဲ မသိဘူး ။ အောင်ဆောင့်တာတွေကို အားမရဘဲ တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ပင့်ပြီး တအားဆောင့်ပေးဖို့ တောင်းခံနေတယ် ။ အောင်လည်း မမ ကျေနပ်စေဖို့ အားပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်တွေကို ဆက်တိုက် မရပ်မနား ပေးလိုက်တယ် ။ တကိုယ် လုံး ချွေးတွေ သီးစီးနေတဲ့အထိ တအား လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ မမ ပြီးသွားတာက သိသာတယ်။ အို အာဟာ….ဆိုတဲ့ မပီမသ ညည်းအော်သံတွေနဲ့ အောင့်ပုခုံး လက်မောင်းတွေကို အတင်းကြီး ဆွဲကုတ် ပြီး ကော့လန်သွားတယ်. . ။ “ အရမ်းကောင်းသွားတယ်….အောင်ရယ်….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အချိန် မပြီးသေးတဲ့ အောင်က ဆက်ဆောင့်ထည့်နေတယ် ။ “ ပုံစံပြောင်းချင်လားအောင်..မမ ဘယ်လိုနေပေးရမလဲဟင်…..ကုန်းပေးရမလား…..” လို့ မောဟိုက်နေတဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးတယ် ။ အောင်လည်း မမကို ဖင်ပူတောင်းထောင် ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် ။ မမရဲ့ ဝိုင်းစက် အချိုးကျတဲ့ တင်ပါး ကြီးတွေက ဖင်ပတောင်း ထောင်လိုက်တဲ့အခါ ပိုလှပြီး တပ်မက်စရာ ကောင်းလွန်းနေတယ် ။ တင်ပါးကြီးတွေ ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ မမရဲ့ ပစ္စည်ကြီးကို ဆက်တိုက် ထိုးညှောင့်ပစ်လိုက်တာ ပြီး တဲ့အချိန် ပန်းထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို မမရဲ့ တင်ပါး ဖွေးဖွေးကြီးတွေ အပေါ်ကို ထုတ်လွှတ် လိုက်မိတယ် ။ ကောင်းလွန်းတဲ့ ကာမ အရသာထူးကြောင့် နုတ်ကလည်း..“ အားအား…..အူး….အင်း….” လို့ ညည်းလိုက်မိတယ် ။
ဒါက ပထမဆုံး အချီပါ ။ မမက အောင့်ကို ကြက်ဥနဲ့ နွားနို့ ဖျော်တိုက်သလို လိင်တန်ကို ချက်ချင်း ပြန်မတ်စေတဲ့ ဆေးပြားလေး တပြားကို တိုက်တယ် ။ မမပေးတဲ့ဆေး အစွမ်းနဲ့ မမကို နောက်ထပ် နှစ်ချီ ထပ်ဆွဲပေးနိုင်လိုက်တယ် ။ မောနွမ်းနေတဲ့ မမက “ အောင်..ဒီမှာ မမနဲ့ဘဲ အိပ်လိုက်ကွာ…မနက်ကျမှ မမ လိုက်ပို့ပေးမယ်….” လို့ ပြောတယ် ။ တကယ့်ကို အိပ်မက်တခုလိုပါဘဲ မမရယ်။ မမကလည်း ကိုယ်တုံးလုံး..ကျနော်ကလည်း ကိုယ်တုံးလုံး ..။ အင်မတန် သားနား သစ်လွင်တဲ့ အဖိုးတန် ကုတင်ကြီးပေါ်က မွေ့ယာထူထူကြီးပေါ် အတူတူ တညလုံး အိပ်ရတာ မဟုတ်လား ။ တကယ်တမ်း ဖြောင့်ဖြောင့် မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး ။ အိပ်ပျော်သွားလိုက်..ပြန်နိုးလာပြီး မမနဲ့ နမ်းလိုက်ကြ ကိုင်ပွတ်လိုက်ကြနဲ့ စိတ်တွေ ပြန်နိုးကြွလာကြပြန်တော့ ထပ်ဆွဲဖြစ်ကြပြန်ရော ။ မမနဲ့ မီးဖိုခန်းထဲမှာ အစားသွား စားဖြစ်ကြတယ် ။ ညသန်းကောင်ယံကြီး ။ မနက် အစောကြီး အောင် ရေချိုးနေတဲ့အချိန် မမ ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင်လာတယ် ။မ အောင့်ကို လာဖက်တယ် ။ မမလည်း ကိုယ်တုံးလုံး..အောင်လည်း ကိုယ်တုံးလုံး…။ မမ က အောင့်ကို ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ပွတ်ပေးတယ် ။ ရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့ ကျောကုန်းကို တိုက်ပေးတယ် ။
မမ ရင်စိုင်ကြီးတွေက အောင့်ကို ဟိုထိဒီထိနဲ့ ။ မမကလည်း အောင့်ပေါင်ကြားက အတန်ကို ကိုင် အောင်ကလည်း မမရဲ့ ပေါင်ကြားက အကွဲကြောင်းကို ကိုင်တယ် ။ ဆွတယ် ။ စိတ်တွေ ကြွထလာပြန်တယ် ။ တညလုံး မနက်လင်းအားကြီးရော မမနဲ့ အောင် အတောမသတ်နိုင်ကြဘူး ။ မနက်ကျတော့ မမ ပင်ပန်းနေပြီး အောင့်ကို လိုက်မပို့နိုင်တော့ဘူး ။ အောင့်ဖါသာ အူးဘား တက်ဆီ ခေါ်ပြီး ပြန်လိုက်တယ် ။ အောင်လည်း မမ နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့မိတာ မမရယ် ။ အောင် ထင်တာ မှားလို့လား ။ မမဘဲ အောင့်ကို ချစ်တယ် လို့ တညလုံး တဖွဖွ ပြောခဲ့တာလေ ။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့တွေမှာ ဖုန်းလည်းမကိုင်တော့လို့ အောင်လည်း မမ အိမ်ကို ပြေးသွားလိုက်တော့ မမ မရှိဘူး ။ မယ်လိုဒီတို့ကို မေးကြည့်တော့ မမ မြန်မာပြည်ကို သွားတာ နေမယ် လို့ မယ်လိုဒီတို့က ပြောတယ် ။ မယ်လိုဒီက “ အောင်..နင် နဲ့ မမ ဘာတွေ ဖြစ်ကြလို့လဲ..” လို့ မေးတဲ့အခါ အောင်လည်း ရေရေရာရာ တိတိကျကျ မဖြေလိုက်ဘူး ။ မမနဲ့ အောင်တို့ ဇာတ်လမ်းကို မမ က ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့ကွာ လို့ အောင့်ကို ပြောခဲ့တယ်လေ ။ တနေ့ အောင် မမကို မော တခုထဲမှာ တွေ့လို့ မမ အနောက်ကို ပြေးလိုက်သွားမိပြီး..“ မမရယ် လွမ်းလိုက်တာဗျာ….မမ ရက်စက်တယ်ဗျာ..ဖုန်းလေးတောင် မဆက်ဘူး..အောင် သိပ် လွမ်းနေတယ် ” လို့ ပြောလိုက်မိတော့ မမရဲ့ တင်းမာတဲ့ မျက်နှာနဲ့ တုံ့ပြန်တာက “ ဒါ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်သွားတာဘဲ….အောင် ..မင်းနဲ့ငါ ထပ်တွေ့စရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး….”တဲ့ ။ မမ ထွက်သွားတော့ အောင် ရင်ထဲမှာ တအား နာနေသလို ထိန်းလို့ မရတဲ့ အောင့် မျက်ရည်တွေက တပေါက်ပေါက်နဲ့ ကျလာတယ် ။ သိပ် ရက်စက်တာဘဲ ….မမ ရယ် ။…….ပြီး